हिमाअस र हेरिका न्यू स्टारको बराबरी – Khel Dainik
हिमाअस र हेरिका न्यू स्टारको बराबरी
पथरी (खेलदैनिक) । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा जारी प्रथम टेन्सवर्ग पथरीशनिश्चरे प्रिमियर लिगको सोमबार भएको खेलमा हिमाअस हाईवे र हेरिका न्यू स्टारले बराबरी खेल्दै अंक बाडेका छन । पथरी रंगशालामा भएको खेलमा हिमाअस हाईवेका आशिश गुरुङले पहिलो हाफको २०औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता लिएका थिए ।
खेलमा १–० ले पछि परेको हेरिका न्यू स्टारले खेलको दोस्रो हाफमा पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । जसलाई दोस्रो हाफको ४३औँ मिनेटमा कप्तान मिन धिमालले गोलमा परिणत गर्दै खेललाई रोमाञ्चक बराबरीमा ल्याएका थिए भने टोलीको सम्भावित हार समेत टारेका थिए ।
लिगको दोस्रो चरणको पहिलो खेल खेल्दै हिमाअस हाईवेले २ र हेरिका न्यू स्टारले १ अंक बटुलेको छ । सोमबारको खेलको म्यान अफ द म्याच हेरिका न्यू स्टारका कप्तान मिन धिमाल घोषित भए ।
लिग अन्तरगत मंगलबारको खेल शिखर एफसी र सिरजंगा एफसीबीच हुने आयोजक कमिटीले जनाएको छ । आउँदो पौष ११ गतेसम्म चल्ने लिगको विजेताले नगद १ लाख ७५ हजार र उपविजेताले नगद ७५ हजार सहित ट्रफि, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन ।
← पल्सर स्पोर्टस अवार्डको १७औं संस्करण ‘सेमिभर्चुअल हुने’ उत्कृष्त जितका साथ आयोजक रानीगञ्ज सेमिफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर २९, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर २९, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर २९, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर २९, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर २९, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर २९, २०७७